Makore gumi nemashanu eCentOS uye kuvhurwa kweCentOS 15 kuri kutogadzirirwa | Linux Vakapindwa muropa
Musi waApril 15, gore regumi nemashanu rakapembererwa kubva pakuberekwa kweimwe yeLinux inoparadzirwa iyo yakave imwe yeakanyanya uye akasarudzika kushandiswa pamaseva, CentOS.
Uye ndizvo izvozvo nhau uye kubvunzurudzwa pfupi naGreg Kurtzer zvakaburitswa pane blog yekuparadzira, uyo aive wekutanga muvambi wechirongwa ichi, icho chakapa mamwe mazwi anokurudzira.
1 Nezve CentOS
2 CentOS inopemberera kuberekwa kwayo kwegumi nemashanu
2.1 CentOS 8 iri kuuya munguva pfupi
About Wiki CentOS
Para avo vasingazive CentOS parizvino (Nharaunda ENTerprise Inoshanda Sisitimu) Ini ndinogona kukuudza kuti izvi ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi Linux kugovera yakagadzirirwa desktop uye server makomputa. Iyi sisitimu nguva dzose inoenderana neshanduro dzichangoburwa dzeRed Hat Enterprise Linux.
Zvakanaka iri bhanari-chikamu forogo yeRed Hat Enterprise Linux RHEL Linux kugovera, rakanyorwa nevanozvipira kubva kunobva kodhi yakaburitswa naRed Hat, mutsauko mukuru kuve kubviswa kwezvose zvinongedzo kumaki uye marogo ari eRed Hat.
Chinangwa chake ndechekupa mushandisi software yemahara "bhizinesi kirasi". Inotsanangurwa seyakasimba, yakagadzikana uye yakapusa kuisa uye kushandisa.
CentOS inopemberera kuberekwa kwayo kwegumi nemashanu
Makore gumi nemashanu zvinonzwika zviri nyore kune vakawanda, asi kune yakavhurwa sosi purojekiti chinhu chakasiyana. Yakanga iri muna 2004 iyo CentOS 2.0 yakatanga seforogo yeRHEL 2 uye kubvira ipapo CentOS yakaramba ichivaka pane zvinyorwa zveRHEL.
Pave nemakore mashanu kubvira vanogadzira CentOS vabatana neRed Hat vachiri kuchengetedza izvi.
Uye isu tinogona kuona izvi mune zvinyorwa zveCentOS blog post:
CentOS yakave nenguva dzakaomarara uye nenguva dzakanaka uye yakapfuura yakati wandei shanduko huru mukati memakore iwayo.
Isu tinofunga isu takamira munzvimbo yakanaka chaizvo mumakore mashanu apfuura, sechikamu cheRed Hat mhuri yemapurojekiti, uye isu tinofara kwazvo nezve izvo zvichauya neCentOS 5 uye makore anouya.
Parizvino, tinoda kudzokera kuti tione kuti takasvika sei patiri izvozvi. Takaita izvi nekudzokera kumashure uye kutaura kune vamwe vevanhu vaibatanidzwa mumakore ekutanga iwayo, pamwe nevamwe vakapinda muchirongwa ichi gare gare.
Greg akave nemukana wekuisa nemaune izwi renharaunda nekugamuchira uye kushivirira.
Izvi zvainyanya nekuti Greg aive nezvakashata zvakasangana nedzimwe nharaunda dzaive neruvengo mumakore iwayo ekutanga.
Uyewo kumwe kubvunzurudzwa kwakaitwa nevakagadziri vakasiyana. Kubvunzana iwe kwaunogona kuona muCentOS blog post.
CentOS 8 iri kuuya munguva pfupi
Nezve kuvhurwa kwe CentOS 8 haina zvakawanda zvakaburitswa, Zvakanaka, izvi zvinozovakirwa paRed Hat 8 (iri mune beta vhezheni).
CentOS haigadzi beta vhezheni, saka hakuzove neiyo beta vhezheni yeCentOS 8, saka iyo CentOS 8 kuburitswa ichave iine RHEL 8.0.
Pari zvino Isu tinongoziva iwo madhiri achave ari muRHEL 8, ayo mamwe acho anotarisirwa kuCentOS 8:
Stratis, maneja wekuchengetedza wepano, anoishandisa kugadzirisa RAID, zvine musoro mavhoriyamu, uye mafaera masystem.
Wayland ndiyo default kuratidza server.
SSSD inoshandiswa kugadzirisa vashandisi vemuno nemapoka, pane kubvunza zvakananga / etc / passwd.
Iyo nftables fomati inotsiva iptables mune iro basa reiyo default network packet kusefa sevhisi.
Berkeley's Yakawedzerwa Packet Filtering ficha (eBPF) inowanikwa seyekuongorora tekinoroji kune ese ari maviri networking uye yekutevera.
XFS inotsigira kuteedzera uye kunyora kwefaira ekuwedzera (anobatsira kutora mashoma emafaira ega).
TLS 1.3 rutsigiro.
NTP yakatsiviwa naChrony.
Bloat: IdM (Identity Management Domain), Cockpit.
Chii chiri pachena ndechekuti CentOS 8 ruzivo rwuchaburitswa panguva yeRed Hat Summit 2019 iyo ichaitwa mwedzi unouya muBoston, MA, kubva muna Chivabvu 7-9.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Makore gumi nemashanu eCentOS uye kuvhurwa kweCentOS 15 kwatova mumabasa
Oracle inosvitsa chigamba che Java chikanganiso chinotora makore matatu